Ego ole bụ ezigbo Whiskey? Kedu maka $60,000 maka Suntory
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ego ole bụ ezigbo Whiskey? Kedu maka $60,000 maka Suntory
Yamazaki 55 dị ugbu a na Global Travel Retail
Ụlọ nke Suntory taa ewebatala oke oke nke mbipụta Yamazaki 55 whiskey dị oke oke na Global Travel Retail, dị na ọnụ ahịa azụmaahịa akwadoro nke $60,000 USD.
Bottled na 2020, Yamazaki 55 bụ ntọhapụ kacha ochie nke Suntory na akụkọ ntolite ya ma na-asọpụrụ ezinụlọ tọrọ ntọala whiskey Japanese, ka ọ na-eme ememe oge “Showa” Japanese nke 1960s.
Yamazaki 55 ga-adị maka ịhọrọ Global Travel Retail nwere karama achọtara na London, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdam, Seoul, Delhi, Istanbul, Dubai na Singapore.
Beam Suntory ga-enye $5,000 USD maka karama ọ bụla ewepụtara na mkpokọta karama 100 nke afọ a, na-agbakọta $500,000 USD, nye The White Oak Initiative, otu na-akwado nkwado ogologo oge nke oke ọhịa oak ọcha America.
Yamazaki 55 bụ ngwakọta nke otu malts dị oké ọnụ ahịa, na-egosipụta ihe ndị e depụtara na 1960 n'okpuru nlekọta nke onye nchoputa Suntory Shinjiro Torii wee mee agadi na okpu Mizunara; na na 1964 n'okpuru nduzi nke Suntory's Second Master Blender Keizo Saji wee mee agadi na okpu White Oak.
Suntory's Fifth-Generation Chief Blender Shinji Fukuyo rụkọrọ ọrụ na Master-Generation nke atọ Blender Shingo Torii ka ha wepụta nka mbinye aka nke ngwakọta iji kpughee omimi pụrụiche, mgbagwoju anya na amamihe bụ Yamazaki 55.
Mmiri mmiri na-esi na ya pụta nwere agba amber miri emi; ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ nke osisi akpụkpọ ụkwụ na mkpụrụ osisi chara acha nke ọma; ụtọ, dịtụ ilu na okpo ọnụ nkụ; na ubé ilu ma ụtọ na ọgaranya imecha.
Manuel González, Onye isi ahịa ahịa GTR maka Beam Suntory kwuru, sị: "Anyị nwere nnọọ mpako na anyị nwere ohere ịnye ndị njem ihe pụrụ iche na nke pụrụiche dị ka Yamazaki 55, okwu ochie nke sitere na Ụlọ Suntory. A ga-egosipụta ngwaahịa a nwere oke oke n'ụfọdụ ebe kachasị mma nke ụlọ Suntory, yana mkpọsa mgbakwunye agbakwunyere ga-abawanye ya. Anyị na-agba mbọ na-eto eto Global Travel Retail site n'ịkwalite onyinye ọhụrụ anyị na iwetara ndị ahịa anyị ahụmịhe kachasị mma na ndụ. "
A kanyere 'Yamazaki' na calligraphy na karama kristal ọ bụla, ebe a na-eji uzuzu ọla edo mesie akara afọ ma jiri lacquer kpuchie ya. A na-eji akwụkwọ Echizen washi ejiri aka mee oghere karama ahụ wee jiri eriri Kyo-kumihimo nwere plaited kechie ya, ọrụ ọdịnala sitere na Kyoto. A na-akụnye karama ọ bụla n'ime igbe e ji osisi Mizunara mee Japanese ma were Suruga lacquer kpuchie ya.